လျှော်စမ်းသပ်မှုများသည့်အခါဘာလုပ်ရမည်နည်း။ THC အဆင့်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေး
ယင်း၏ THC အဆင့်များသည်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် -0.3 THC အတွက် ၀.၃% သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောအခါ Hemp သည်စမ်းသပ်သည်။ သင်၏လိုင်စင်ကိုမထိခိုက်စေရန်လျှော်သောပူလျှော်သည်အလွန်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရမည်။
Hemp Hot ဆိုတာဘာလဲ?
စောင့်ကြည့် ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေ, Tom, Delta သည်၎င်း၏မြစ်ဝကျွန်းပေါ် -9၉ THC အဆင့်အတွက်အပူစမ်းသပ်သောအခါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုရှင်းပြပါ။
Hemp စီးပွားရေးအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
"Hemp ပူ" ဆိုလိုသည်မှာ delta-9 THC အဆင့်သည်ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသော ၀.၃% သတ်မှတ်ထားသောကျော်လွန်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုပြည်နယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အချို့သောအလွန်အမင်းကန့်သတ်ချက်ရှိသော၊ ထပ်မံကုစားခြင်းနှင့်မသိဘဲလျှို့ဝှက်စိုက်ပျိုးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် THC အဆင့်တွင်စမ်းသပ်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှော်စက်၏စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းအတွက်လျှော်သီးသီးကိုစမ်းသပ်သည့်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသော tetrahydrocannabinolic acid (THCa) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက delta-0.3 THC နှင့်အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ချက်များသည်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ ယင်း၏ထဲကသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး 9% ။ မျိုးစေ့မှအပင်ပေါက်ခြင်းနှင့်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပူပြင်းခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ F အမျိုးအစားမျိုးဆက် F99.7 သည် F1 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျှော်၏ THC မျိုးရိုးဗီဇ၏တည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ပူပြင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုများ Hemp များအတွက်သိကောင်းစရာများ
လျှော်စစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်သမားများစွာသည်အဖြစ်မှန်နှင့်ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ သူတို့၏လျှော်ကြေးသည်အများအားဖြင့်ပူလေ့ရှိပြီး၊ ဤအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏လျှော်စမ်းသပ်သည့်အခါသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိရမည်။ ဒီမှာအဖြေတွေရှိတယ်။
အများစုပြည်နယ်များအတွက်တရားဝင်ကန့်သတ် လျှော်တွင် THC အဆင့်သည် ၀.၃% ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏လျှော်ပမာဏသည်အတိအကျရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ် THC ပမာဏနည်းရမည်။ စမ်းသပ်မှုများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်အများစုသည်လျှော်တွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုတိုင်းတာသည်။ cannabinoids, terpenoids နှင့် flavonoids များကိုသီးခြားခွဲထုတ်ထားခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤအ parameters တွေကိုတိုင်းတာခြင်းလျှော်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်မှုသည်မလုံလောက်ပါကသင်၏တင်ပါးက THC ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုပြသနိုင်ပြီးသင့်ကိုအကူအညီတောင်းရန်သင့်အားနေရာချပေးသည်။ ရှေ့နေအများစုသည်သင်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စစ်ဆေးခြင်းသည်လျှော်ကြေး၏ THC အဆင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏လျှော်အောက်ရှိ THC အဆင့်သို့ရောက်သောအခါသင့်အားအပြည့်အ ၀ လုံခြုံမှုပေးသောတရားဝင်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလယ်သမားများတွင်မျိုးစေ့များစွာရှိပြီးမျိုးစေ့တစ်ခုစီကိုစိုက်ပျိုးရန်မှာစိန်ခေါ်မှုများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်မြေဆီလွှာထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောမျိုးစေ့အသစ်များသည်ဓာတုပစ္စည်းများပိုမိုသယ်ဆောင်ပေးပြီး၎င်းတို့တွင်သဘာဝအရ THC အဆင့်မြင့်သည်။ ဤသည်ကိုအထူးစိုက်ပျိုးခြင်း၏ပထမနှစ်တွင်မြင်နိုင်သည်။
လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းများလယ်သမားများသည် THC စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေပြသည့်မျိုးစေ့များကိုအသုံးပြုရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည် THC စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်ကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်သောရိတ်သိမ်းနည်းစနစ်များကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလုပ်ပြီးသည်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်“ မလုံခြုံ” သောလျှော်ကိုဖျက်ဆီးရမည်။ ၎င်းသည်ခြုံငုံတိုးတက်မှုအတွက်ငွေအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသောလယ်သမားများအတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအစေ့တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ရာသီမှာစရပါမယ်။
အဆိုပါလျှော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ခြင်းသင်စျေးကွက်စူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်, လျှော်ပူသည်စမ်းသပ်နိုင်သော်လည်းဤလျှော်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်အပန်းဖြေရန်အတွက်လျှော်ကိုကြီးထွားရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါကပူပြင်းသည့်စမ်းသပ်မှုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်၏မျိုးစေ့များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်ဖော်ပြပါကသင်ကစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် THC အဆင့်သည်အတိအကျဖြစ်ရမည်။ အဆင့်ကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်ထားရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့လျှော်စမ်းသပ်မှုပူလျှင်, သင်ကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါဒုတိယအမြင်ရရန်ဖြစ်သည်။ THC ၏ဒြပ်စင်များကိုစစ်ဆေးမည့်နောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုအတွက်သင်သည်လျှော်ကိုပို့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုသည်ထပ်တူရလဒ်များကိုပြပါကသင်၏တင်ပါးတွင် THC ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ရှိသည်။
သင်၏လျှော်ရောင်းသူသည်အပူပေးလျှင်သင်၏မျိုးစေ့ရောင်းချသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ရောင်းချသူအများစုသည်မျိုးစေ့အရည်အသွေးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ မသင့်တော်သောမျိုးစေ့များကိုတောင်သူလယ်သမားများအားရောင်းချခွင့်မပြုသင့်ပေ။ သူတို့လုပ်ရင်ဥပဒေချိုးဖောက်နေတယ်၊ ​​မင်းအမှုစတင်နိုင်ပါတယ်။ မျိုးစေ့ရောင်းချသူများသည်မျိုးစေ့ပမာဏ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်။ သူတို့ထံမှသင်ဝယ်ယူသောမျိုးစေ့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသင့်အားအသိပေးရမည်။
အကယ်၍ သင်ရောင်းသူနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါက၎င်းကိုအကုန်လုံးဖတ်ပြီးဒြပ်စင်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားပြီးပြသရန်နေရာမရှိပါ။ စာချုပ်တွင်သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုစနစ်တကျစိုက်ပျိုးပြီးလုံလောက်စွာစိုက်ပျိုးသည်ဟုဆိုပါကသင်သည်လျှော်စွာတားဆီးထားသော THC အဆင့်သို့မည်မျှရောက်ရှိနိုင်သည်ကိုသင်သိခွင့်ရှိသည်။
သင်၏လျှော်စမ်းသပ်မှုသည်ပူလျှင်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည်သင်၏ရှေ့နေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ပညာတတ်တဲ့ရှေ့နေကိုဖုန်းဆက်ပါ။ လျှော်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထိခိုက်ပျက်စီးသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊
သင်၏လျှော်ရေပူသည်စမ်းသပ်သောအခါအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာလျှော်ကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။ သင်ငွေနှင့်အချိန်များများစားစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောကြောင့်ဖျက်ဆီးခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လျှော်ကြေးကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသောလျှော်ကိုအာရုံစိုက်သည်။
သငျသညျလျှော်ဖျက်ဆီးသောအခါ, သဲလွန်စကျန်ကြွင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ မလုံလောက်သောလျှော်ကျန်ရှိသည့်ဒေသများတွင်မြေဆီလွှာသည်လျှော်ကြေး၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအနာဂတ်မျိုးစေ့များအားလုံးသည်ယခင်လျှော်ကြေး၏လက္ခဏာများကိုမွေးမြူနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်completelyရိယာကို“ ရှင်းလင်း” ရန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏လျှော်ညှပ်စမ်းသပ်သည့်အချိန်များတွင်စည်းမျဉ်းအရာရှိများ၏ထောက်ခံမှုကိုရရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် THC အဆင့်ထက်ကျော်လွန်သောမျိုးစေ့များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကသင့်အားငွေရေးကြေးရေးအရဒဏ်ခတ်နိုင်သည်။ လယ်သမားအများစုသည်အထူးသဖြင့် THC အဆင့်မများပါကဒဏ်ငွေအနည်းငယ်သာရကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလျှော်ဖျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာရှိများ၏တိုင်းတာမှုများကိုမကျင့်သုံးသောလယ်သမားများသည်ကြီးမားသောဥပဒေရေးရာပြtroublနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
လျှော်ကို Safe ထားရန်အဘယ်သို့ပြုရမည်
ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်လျှော်စေ့ကိုသေချာစွာရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့မျိုးစေ့များအထူးသဖြင့်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် THC အဆင့်သိသိသာသာတိုးလာသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသောစမ်းသပ်ပြီးသောစမ်းသပ်ပြီးသောမျိုးစေ့များကိုစွဲမြဲခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
THC ပိုမိုမြင့်မားသော THC ပမာဏနှင့်အတူလျှော်ထားခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပြcomplနာများကိုကာကွယ်ရန်အချိန်ပိုပေးခြင်းသည်ဥပဒေပြlawနာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
ဥပမာအားဖြင့်မှန်ကန်သောမျိုးစေ့များကို အသုံးပြု၍ မှန်ကန်သောကြီးထွားမှုနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏တင်ပါးသည်အပူမစမ်းသပ်ဘဲရောင်းချသူအမြောက်အမြားကိုရောင်းချရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သင်၏လျှော်ညှပ်သည်ပူလာသောအခါထိုပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်ရှေ့နေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကိုသုံးပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်၌လုံခြုံမှုရှိကြောင်းသေချာစေသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ငွေသားသီးနှံများကိုတရားမ ၀ င်ဆေးခြောက်ကြီးထွားလာရန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ၊ အောင့်သက်သက်သာသာဖြင့်တရားမဝင်သောလျှော်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုဥပဒေများကခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုမစတင်မှီ - သင်သည်သတင်းအချက်အလက်မဟုတ်ဘဲတရား ၀ င်အကြံဥာဏ်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ၊ သင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်ပြီးဆေးခြောက်တင်သူများအတွက်တရားဝင်သတင်းရယူရန်လိုသည်ကိုရိုက်နှက်ပါ။
ပထမ ဦး စွာသင်၏စမ်းသပ်မှုသည်ကောင်းမွန်သောစမ်းသပ်မှုဓာတ်ခွဲခန်းမှလာပြီး total-THC အတွက်မဟုတ်ဘဲ delta-9 THC ဖြစ်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၌လျှော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ရှိပါကဖော်ပြသည့်မှော်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုကို Gas Chromatography ဖြင့်မပြုလုပ်သင့်ပါ၊ သို့သော်မြင့်မားသောဖိအားအရည် Chromatography၊ mass spectrometry နှင့်အတူ - တိုတောင်းသောအဘို့အ LC-MS။ သင်ဓာတ်ခွဲခန်း၏ရလဒ်များကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချလျှင်ပင် - သီးနှံထပ်မံစစ်ဆေးပါ - ဖြစ်နိုင်သည်မှာအားလုံးအမှား ဖြစ်၍ ဒုတိယအမြင်ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်သည်။ လျှော်မှမျိုးဗီဇသည်အထူးသဖြင့်မျိုးစေ့များမှကြီးထွားလာသောအခါမတူညီပါ။
ထို့အပြင်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ ၂၀၁၁၉ သစ်ကြံသီးနှံမှာပေါက်ကွဲခဲ့သည် 50,000 ခုနှစ်တွင် 2018 ကျော် 200,000 မှ 2019 ခုနှစ်တွင်,XNUMXက XNUMX ။ လျှော်မျိုးစေ့ ၀ ယ်လိုအားအလွန်အမင်းလိုအပ်ချက်သည်အချို့သောမျိုးရိုးဗီဇများကိုညှိနှိုင်းပြီးနောက်တွင်သူတို့၏ကြော်ငြာများနှင့်မကိုက်ညီသော၊ THC တွင်အမျိုးသမီးများနည်းတူသို့မဟုတ် THC တွင်လည်းအနိမ့်အမြင့်မပါရှိသည့်ရောင်းအားအချို့ကိုမြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဒုတိယထင်မြင်ချက်ကိုရရှိပြီးနောက်သင်သည်သင်၏လျှော်မျိုးစေ့ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။ ၎င်းသည်မျိုးစေ့ရောင်းချသူမှမည်သည့်ကြော်ငြာများကိုဖော်ပြသင့်သည်၊ THC မျှော်လင့်ထားသည့်ပမာဏနှင့်အမျိုးသမီးအမျိုးအနွယ်၏ရာခိုင်နှုန်း - ဟုခေါ်သည့်အရာကိုလည်းထောက်ပံ့သင့်သည်။ အောက်မှာ ယူနီဖောင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုဒ် (UCC) သည်မကိုက်ညီပါ ကုန်ပစ္စည်းများ။ ၎င်းသည် ၀ ယ်သူအားအချို့သောကုစားမှုများကိုပေးသည့်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သင့်သည်။
မင်းပြောတာကမင်းမျိုးစေ့ရောင်းသူနဲ့စာချုပ်မချုပ်ခဲ့ဘူး၊ မင်းရဲ့ဘဝစုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုစက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုမပါဘဲဒီလျှော်စည်ကြီးထဲကိုထွန်ယက်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ, စာချုပ်အခွင့်အရေးများပြenfor္ဌာန်းရန်မှကြွလာသောအခါရှေ့နေများကအများကြီးကူညီပေးနိုင်ပါသည် - ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အချိန်ဖြတ်သန်းသွားလာလို့မရပါဘူး။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာချုပ်မရှိပါက UCC ၏ပုံမှန်ပြဌာန်းချက်များကသင်၏စာချုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောင်၌လျှော်မျိုးစေ့များကို ၀ ယ်သောအခါစာချုပ်ဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်အနောက်တောရိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်သတိထားပါ။
ဘာလဲ - မင်းမှာရှေ့နေမရှိဘူး၊ စာဖတ်လို့ကောင်းတယ်၊ စာချုပ်လည်းမရှိဘူး၊ မင်းစာရေးလို့မရဘူး၊ ဒါလည်းကောင်းတယ်၊ မင်းမှာတစ်နေ့တာငရဲရှိတယ် - မဟုတ်ဘူး ကောင်းဘွိုင်တွေနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ခင်ခင်ဗျားရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖုံးအုပ်မထားတာကြောင့်မင်းကိုလက်ချောင်းတွေလှုပ်ခတ်နေတယ်။
သင်၏ရှေ့နေသည်သင်၏ပြည်နယ်၏ဥပဒေများသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများကိုသင့်ပြည်နယ်မှ၎င်းတို့၏လျှော်အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းပါကသာမကသင်တင်ပါးသီးနှံအတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပါလမ်းညွှန်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပူသောပူပြင်းခြင်းကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အပြစ်မဲ့စိုက်ပျိုး။
ဘေးဖယ်သကဲ့သို့ 2019 သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စိုက်ပျိုးသောဆေးခြောက်အတွက်အကြီးမားဆုံးသီးနှံနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လျှော်စိုက်ပျိုးသည့်howကများစွာသည်ပူပြင်းစွာစမ်းသပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့်ဆုံစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အသစ်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သင်၏အမျိုးသမီးရောင်းချသူနှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးသည်ရှေ့နေကိုနောက်တစ်ယောက်နှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်ခြိမ်းခြောက်ရန်လိုသောစာနှင့်မစပါနှင့်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ၌တစ် ဦး လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုဝယ်ယူရေးစာချုပ်ထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဝါကျထည့်ပြီးပါပြီ။ ခင်ဗျားဒီမှာမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ မျိုးစေ့တွေပါဝင်တဲ့အခါတစ်ခါတစ်ရံမှာခုန်ပေါက်တတ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာချုပ်မပါဘဲလုပ်ဆောင်နေပါကသင်ဝယ်ယူလိုက်သောမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီသည်ကောင်းမွန်ပြီးသင့်ရှုံးနိမ့်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်သက်သာစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သူတို့၏လူမှုမီဒီယာတွင်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ပို့စ်များကိုရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှုအရာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဥပဒေပြုတာကလုပ်တာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။
သင်၏ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွင်အမြတ်အစွန်းများဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသော်လည်း၎င်းသည်အသစ်စက်စက်စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်နှင့်အမှန်ပင်မှန်းဆနိုင်သည်။ သက်သေပြရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်သင့်ရဲ့မျိုးစေ့များနှင့်အာဟာရဓာတ်များ၊ သင့်လုပ်အားစသည့်ခက်ခဲသောကုန်ကျစရိတ်များသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပျက်စီးလွယ်သောပျက်စီးမှုများဖြစ်သည်။
သင်၏အခြေစိုက်စခန်းများကိုဖုံးအုပ်ရန်ကြိုးစားပြီးပူသောလျှော်ကိုဒုတိယအချက်ဖြင့်အတည်ပြုပြီးနောက်။ ထို့နောက်သင်၏ပြည်နယ်၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့ပေါ့ဆဆထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၉ THC အတွက် ၀.၃% သည်အနည်းဆုံးဖယ်ဒရယ်ဥပဒေအောက်တွင်လျှော်နှင့်ဆေးခြောက်ကြားကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ပေါ့ဆမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြားရှိကန့်သတ်ချက်သည်ဖြတ်သွားလျှင် - သင်သည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုကိုစွန့်လွှတ်လျှင်၎င်းသည်အလေးချိန်အလွန်ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်သင်မလုပ်သင့်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ ဒါကြောင့်လျှော်လွန်းနေတယ်ဆိုတာသေချာရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေပါနဲ့။ သင်ဟာဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးသင့်ရဲ့ကာကွယ်မှုကိုခံယူရပါမယ်။ အရက်။
ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရဲ့လျှော်ဖိုကိုဖျက်ဆီးရတော့မယ်၊ နောက်နှစ်မှာသင်မျိုးပွားလို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်နယ်အတော်များများကမင်းတို့ရဲ့ကြီးထွားလာမှုကိုအာမခံနိုင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံရှိဖို့လိုအပ်တယ်၊ လျှော်နှင့်မဆေးခြောက်။ သငျသညျဆေးခြောက်ကြီးထွားနှင့်သင်၏လိုင်စင်အန္တာရာယ်မတိုင်မီကလျှော်ဖြစ်ပါတယ်ထင်မည်မျှနှစ်ပေါင်းအပေါ်ကန့်သတ်ရှိသည်။
ပြည်နယ်မှသင့်အားဖိုင်ဘာဖြင့်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုပါကသင်သည်သစ်သီးများမှလျှော်ဖုံဘူးများကိုဖယ်ရှားကောင်းဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ သို့သော်စိုက်ပျိုးမှုများမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်သင်ကံမကောင်းပေ။ တဖန်လျှော်စိုက်ပျိုးရန်သင်၏လိုင်စင်သည်မကောင်းသောပူပြင်းသည့်သီးနှံတစ်မျိုးထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေကိုလိုက်နာပြီး၎င်းသည်ဤတောရိုင်းအနောက်ပိုင်းနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအခြားရာသီသို့ဆက်သွားနိုင်ရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောဆိပ်ကမ်းကိုရင့်ကျက်စေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Hemp Litigation ပူအတွက်လာနေသည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏သီးနှံများပူပြင်းလာခြင်းသည်သူတို့၏အမှားအမှန်ဖြစ်ပါကမျိုးစေ့ရောင်းသူနှင့်သင်အခြေချရမည်။ CBD နှင့် THC တို့၏မျိုးရိုးဗီဇသည်ခက်ခဲသည်။ အီလီနွိုက်စ်အတွက် Cherry Wine သည်တည်ငြိမ်သောမျိုးစေ့ဖြစ်သော်လည်းအခြေအနေတစ်ခုတွင်အချို့မျိုးစေ့များသည်ကွဲပြားခြားနားစွာကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မျိုးရိုးဗီဇအသစ်များ၊ သစ်ပင်များကိုဖန်တီးရန်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လာမယ့်လာမယ့်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးခြောက်နည်းပညာရဲ့အစေးကပ်နေတဲ့အတွက် - ပြန်ခေါ်ကြရအောင်၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားကြိုက်ခဲ့ရင်အရင်ဆုံးကြိုက်သလိုစာရင်းသွင်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းကိုမင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် - သင်သည်သင်၏လျှော်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ Delta-9 THC အဆင့်သည် ၀.၃% ထက်ကျော်လွန်ပါကသင်၏လိုင်စင်သည်လုပ်ဆောင်မှုအချို့လိုအပ်သည်။
ဒီမှာသင်ဘာလုပ်သင့်လဲ လျှော်သီးသီး THC အပေါ်ပူလာသည်။
သင်၏လျှော်တေ၏ THC အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအချက်ကိုရယူပါ
မြင့်မားသော THC အဆင့်ရှိသောလျှော်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများကမည်သို့ပြန်ပြောသနည်း
Hemp's THC အဆင့်နှင့်ပြtheနာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မျိုးစေ့ရောင်းချသူအားဆက်သွယ်ပါ